Somali News 3.2.22
Published March 3, 2022 at 9:53 AM CST
Saraakiisha federaalku waxay sheegeen in hargabka shimbiraha laga helay xayn digaagad iyo shinbiraha oo ku taal galbeedka Iowa. Waa horumar gaar ah oo murugo leh oo ku yimid dawlad ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee digaagga ukunta. Saraakiisha gobolka ayaa karantiilay goobta uu cudurka ka dilaacay ee ka tirsan ismaamulka Pottawattamie waxaana shimbiraha la dilay si looga hortago faafitaanka cudurka. Kiisaska ayaa laga helay adhiga iyo beeraha aan ganacsiga ahayn ee dalka bishii la soo dhaafay. Cudurkii ugu horreeyay waxaa lagu aqoonsaday beer turki ah oo ku taal Indiana Feb.
Shan degmo oo kale oo Iowa ah ayaa soo saaray mamnuucid gubasho iyadoo saddex ka mid ah ay ku sugan yihiin aagga Siouxland xaaladaha cimilada ee hadda jira awgeed.
Degmooyinka waxaa ka mid ah Degmada Monona, Degmada Crawford, iyo Degmada Harrison. Waxaa horey u jiray mamnuucid Degmooyinka Woodbury iyo Plymouth.
Heerarka COVID-19 ayaa ku soo socda gudaha gudaha iyo guud ahaan gobolka Iowa.
Saraakiisha federaalku waxay ka warbixinayaan ilaa 200 oo Iowans ayaa hadda cusbitaalka loo dhigay COVID-19, oo ay ku jiraan shan ku yaal labada isbitaal ee Sioux City.
Tirada guud ayaa hoos uga dhacday tiradii todobaadkii hore ee 345.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa sheegay in in ka badan 2,300 oo baaritaanno COVID-19 ah la xaqiijiyey toddobadii maalmood ee la soo dhaafay.
Taasi waxay si weyn hoos ugu dhacday in ka badan 4,800 oo la soo sheegay todobaadkii hore.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa sidoo kale xaqiijiyay usbuucii la soo dhaafay 86 dheeraad ah oo u dhintay fayraska, taasoo tirada guud ee dhimashada gobolka ka dhigaysa in ka badan 9,100. Caafimaadka Degmada Siouxland ayaa diiwaangeliyay 13 dhimasho 30-kii maalmood ee la soo dhaafay.